‘अन्दाज अपना अपना’ को सिक्वेल बन्ने, सलमान र आमिरसँग अरु को–को हुने ?
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जन बलिउड‘अन्दाज अपना अपना’ को सिक्वेल बन्ने, सलमान र आमिरसँग अरु को–को हुने ?
बलिउडका दुई चर्चित अभिनेता आमिर खान र सलमान खानको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘अन्दाज आपना आपना’को सिक्वल बन्ने भएको छ । यस फिल्ममा सलमानले ‘प्रेम’ र आमिरले ‘अमर’को भूमिका निर्वाह गरेका थिए । १९९४ मा रिलिज भएको यो हिट फिल्मले दर्शकहरुलाई खुब हँसाएको थियो । फिल्मको कहानी पनि असाध्यै राम्रो बनेको थियो ।
राजकुमार सन्तोषीले निर्देशन गरेको यस फिल्ममा सलमान र आमिरसँगै करिश्मा कपूर, रविना टण्डन, परेश रावल र शक्ति कपूरलगायत मुख्य भूमिकामा थिए । अब भने यो फिल्मको सिक्वेल बनाउने तयारी धमाधम भइरहेको छ । यस फिल्मको सिक्वेलमा अर्को दुइ चर्चित अभिनेता रणवीर सिंह र बरुण धवनको मुख्य भूमिका रहने बताइएको छ ।
यस फिल्मका लेखक दिलिप शुक्लाले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा आफुले फिल्मको कहानी लेखि रहेको र फिल्मको सिक्वेलको कहानी लेख्न गार्हो हुने बताएका छन् । उनले आफुले उक्त फिल्मको सिक्वेललाई पहिलो फिल्मको तुलनामा अझ धेरै गुणा बढी आकर्षित बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए । फिल्म ’अन्दाज आपना आपना’को सिक्वेल सलमान र आमिर खान बिना सम्भव र पूरा नहुने भन्दै यस फिल्मको सिक्वलमा तीन जना नयाँ कलाकारहरुको साथमा सलमान र आमिर पनि संगै देखिने भएका छन् ।
अहिलेको समयमा आमिर आफ्नो नयाँ फिल्म ‘लाल सिंह चढ्डा’को तयारीमा जुटेका छन् भने सलमान आफ्नो नयाँ फिल्म दबंग ३को छायांकनमा ब्यस्त रहेका छन् । उनीहरु दुबैको यो फिल्मको काम सकिसके पछि र फिल्मको स्क्रिप्ट सकेपछि यस फिल्मको बारेमा बिस्तृत जनाकारी आउने फिल्मका लेखक दिलिप शुक्लाले बताएका छन् ।